ကာဗာနီ ဘာကွောငျ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာလဲ ? – Premier League Special
ကာဗာနီ ဘာကွောငျ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာလဲ ?
May 11, 2021 Author 01 Article 0
အကျဒီဆငျ ကာဗာနီဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးနိုငျခဲ့ကွောငျး အသငျးဝကျဆိုဒျကနေ အတညျပွုပွောကွားထားပါတယျ။
ဥရုဂှေးကစားသမားရဲ့ စာခြုပျသဈဟာ ( ၂၀၂၂ ) ဇှနျလ ထိ ပါဝငျပွီး တိုကျစဈမှူးအတှကျ မသခြောတဲ့ ကာလတှေ အဆုံးသတျသှားပွီလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ကာဗာနီက ယူနိုကျတကျ ဝကျဆိုဒျနဲ့ အငျတာဗြူးရာမှာ အသငျးအပျေါ သံယောဇဥျရှိနတေဲ့အတှကျ ခကျြခငျြးခှဲခှာဖို့ ဆန်ဒမရှိကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကာဗာနီက “ ဘောလုံးရာသီတဈလြှောကျလုံး အသငျးအပျေါ အကြိုးပွုနိုငျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။
နောကျကှယျက ဝနျထမျးတှေ နှငျ့ အသငျးဖျောတှအေပျေါ သံယောဇဥျရှိနတေယျလို့ ခံစားရပါတယျ။
ဒါက ကြှနျတော့အတှကျ နစေ့ဥျ ခှနျအားဖွဈစပေါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ထူးကဲတဲ့အောငျမွငျမှုတှကေို အတူတကှ ရယူနိုငျလိမျ့မယျ လို့ ယုံကွညျပါတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
“ ကြှနျတျောအသငျးကို ရောကျတဲ့ ပထမနမှေ့ာကတညျးက မနျနဂြောရဲ့ ယုံကွညျမှုကို ခံစားရပါတယျ။
ကစားသမားတဈယောကျအတှကျ အဆိုပါ ယုံကွညျမှုက အကောငျးဆုံးကစားနိုငျဖို့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အခှငျ့အရေးဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူ့ကို ကြေးဇူးတငျခငျြပါတယျ။”
“ အသငျးပရိသတျတှကြှေနျတျောကို ဘယျလောကျထိ ဒီမှာ ဆကျနစေခေငျြသလဲဆိုတာ ကြှနျတျောခံစားမိပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ကှငျးတှငျး စှမျးဆောငျရညျတှနေဲ့ သူတို့ ပြျောရှငျဖို့ အရာရာ ပေးဆပျသှားမှာပါ။
ကြှနျတျော အိုးထရတျဖို့ဒျ ပရိသတျရှမှေ့ောကျမှာ ကစားခှငျ့မရသေးပါဘူး ။ ဒါက ကြှနျတျော စောငျ့ဆိုငျးနတေဲ့ အရာပါ။”
ကာဗာနီ ဘာကြောင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ ?
အက်ဒီဆင် ကာဗာနီဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အသင်းဝက်ဆိုဒ်ကနေ အတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။
ဥရုဂွေးကစားသမားရဲ့ စာချုပ်သစ်ဟာ ( ၂၀၂၂ ) ဇွန်လ ထိ ပါဝင်ပြီး တိုက်စစ်မှူးအတွက် မသေချာတဲ့ ကာလတွေ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကာဗာနီက ယူနိုက်တက် ဝက်ဆိုဒ်နဲ့ အင်တာဗျူးရာမှာ အသင်းအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့အတွက် ချက်ချင်းခွဲခွာဖို့ ဆန္ဒမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကာဗာနီက “ ဘောလုံးရာသီတစ်လျှောက်လုံး အသင်းအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ကွယ်က ဝန်ထမ်းတွေ နှင့် အသင်းဖော်တွေအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့အတွက် နေ့စဉ် ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ထူးကဲတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို အတူတကွ ရယူနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်တော်အသင်းကို ရောက်တဲ့ ပထမနေ့မှာကတည်းက မန်နေဂျာရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ခံစားရပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် အဆိုပါ ယုံကြည်မှုက အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။”
“ အသင်းပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကို ဘယ်လောက်ထိ ဒီမှာ ဆက်နေစေချင်သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ သူတို့ ပျော်ရွှင်ဖို့ အရာရာ ပေးဆပ်သွားမှာပါ ။ ကျွန်တော် အိုးထရတ်ဖို့ဒ် ပရိသတ်ရှေ့မှောက်မှာ ကစားခွင့်မရသေးပါဘူး ။ ဒါက ကျွန်တော် စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အရာပါ။”
ဂီတာဖေးနဲ့ပှဲအတှကျ ရီးရဲလျလူစာရငျးမှာ စီနီယာ Outfield ကစားသမား ၁၁ ဦးသာ ပါဝငျ
ဧရိယာအပွငျထိထှကျကာ လကျစှမျးပွခဲ့ပမေယျ့ VAR ကယျလို့ ဆကျကစားခှငျ့ရသှားတဲ့ အရီယိုလာ